भगवति भन्छिन्– ‘म विजय गच्छदारलाई हराउँछु’, अाखिर को हुन भगवति ? « Deshko News
भगवति भन्छिन्– ‘म विजय गच्छदारलाई हराउँछु’, अाखिर को हुन भगवति ?
सुनसरी, कात्तिक २०
सुनसरीमा ठूला दलका एक मात्र महिला उमेदवार भगवति चौधरीले पटक पटक मन्त्रि भइसकेका विजय कुमार गच्छेदारलाई पराजित गर्ने दावी गर्नुभएको छ । चौधरी वाम गठवन्धनवाट सुनसरी क्षेत्र नम्वर तीनको उमेदवार हुनुहुन्छ ।
तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष नेपाली काग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदार र एमाले नेतृ चौधरी बिच सुनसरी क्षेत्र नम्वर तीनमा प्रतिष्पर्धा हुदैछ ।
२०४६ साल यता गच्छेदार सत्ता भन्दा वाहिर कमैमात्र रहेपनि सुनसरी क्षेत्र नम्वर तीनका लागि भने खासै केहि नगरेका लागि जनताले परिवर्तन चाहेको चौधरीको भनाई छ ।
परिवर्तन विकास र सम्वृद्धिका लागि यहाँको जनताले आफूलाई फराकिलो अन्तरले जिताउने चौधरीले दावी गर्नुभयो । गच्छेदार पदलोलुप र अवसरवादी भएको तर विकासवादी नभएको जनताले वुझिसकेको चौधरीले आरोप लगाउनुभयो ।
गएको संविधानसभा निर्वाचनका वेला काग्रेसका नेताहरुलेनै उहाँलाई सो आरोप लगाउदै चुनाव प्रचार गरेको जनताले भूलेका छैनन अहिले नेपाली काँग्रेसले के भनेर उहाँको पक्षमा भोट माग्छन ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
गत संविधानसभा निर्वाचनमा आफू नै बिजयी भएपनि जालझेल गरेर हराइएको चौधरीको आरोप छ । गत सँबिधानसभा निर्वाचनमा पनि उहाँहरु बिचनै प्रतिष्पर्धा भएको थियो ।
गच्छेदारले २० बर्षमा नगरेको काम आफूले पाँच बर्षमै गरेर सुनसरी क्षेत्र नम्वर तीनलाई देशकै नमूना क्षेत्र वनाउने चौधरीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
को हुन भगवति चौधरी
भगवति चौधरी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पूर्व वनराज्य मन्त्री रहिसक्नुभएको छ । चौधरी राजनीति र समाजसेवामा उत्तिकै परिचित नाम हो ।
उहाँ लघुवित्त क्षेत्रमा नेपालमै अग्रणी महिला मानिनुहुन्छ । आफनो समूदायमा त चौधरी रोलमोडलनै मानिनुहुन्छ । स्नातकोत्तर चौधरी जुन वेला विद्यालय शिक्षाका लागि स्कुल जानुभयो त्यो वेला उहाँको गाँउठाँउमा छोरीलाई पढन स्कुल पठाइदैनथ्यो ।
उहाँ स्कुल जान थालेपछि मात्र त्यो ठाँउमा छोरीलाई स्कुल पठाउन थालिएको हो । उहाँको नेतृत्वमा रहेको फरवार्ड सस्थामा हाल देशभरका हजारौ महिला सँगठित छन ।
उहाँले आफनो सस्था मार्फत हजारौ महिलालाई स्वावलम्वन वनाउनुभएको छ । महिलाको आर्थिक शशक्तिकरण नभएसम्म समाज रुपान्तरण हुन नसक्ने चौधरीको दावी छ ।
यस्तो छ भगवति चौधरीको चुनावी एजेण्डा
वेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने चौधरीको मुख्य चुनावी एजेण्डा रहेको छ । उहाँले एक घर एक रोजगार प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सुनसरी क्षेत्र नम्वर तीनमा दुई बर्ष भित्रमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।
हरेक वडा वडा वाट डाक्टर,इञ्जिनियर,पाइलट लगायतका प्राविधिक उत्पादन गर्र्ने उहाँले जनाउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढाएर पाँच हजार पुरयाउने,घर घरमा पूँजीको पहुच गराउदै आर्थिक स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम सँचालन गर्ने चौधरीको योजना छ ।
सुनसरी क्षेत्र नम्वर तीनका पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण र विकास गर्दै आन्तरिक र वाहय पर्यटक भित्राउन उहाँले विशेष योजना वनाउनुभएको छ । गाँउ गाँउका कच्चि सडकलाई कालोपत्रे गर्ने लगायत भगवति चौधरीका चुनावी एजेण्डा छन ।